Homeसमाचार‘दुर्लभ’ आँपका बोटलाई सुरक्षा दिन, ६ कुकुर र चार गार्ड खटाइयो
June 19, 2021 admin समाचार 3459
अहिले आँपको मौस’म छ । बजारमा किसिम किसिमका जताततै आँपै आँप छन् । तर के तपाईलाई बिश्वा’स लाग्छ? कुनै परिवारले आँपको बगैँचाको सुरक्षाका लागि ६ कुकुर र ४ जना गार्ड सहितको पहरा दिन्छ भनेर? भा’रतमा यस्तै भएको छ ।
एक दम्पतीले लगा’एको आँपको बोटमा जब गत वर्ष आँप फले ती हरिया थिए’नन् न त पाकेपछि पँहेला भए। ती दुई बोटमा फलेका आँप रूबी रङका थिए। अनौठा आँप फलेपछि परिहर दम्प’ती चकित परे। उनीहरूले आँप किन र कसरी रूबी रङको भयो भन्नेबारे बुझ्दै गएपछि थाहा पाए, उनीहरूको बगैंचामा भएको आँप मिया:जाकी प्रजातिको हो ।
जापानको मियाजा’की शहरको नामबाट यसको नाम राखिएको हो । मियाजाकी विश्वमै सबैभन्दा महंगो आँपम’ध्ये एक हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत वर्षमात्रै किलोको दुई लाख ७० हजार भारतीय रुपैयाँमा बिकेको थियो।
परिहर दम्प’तीको बगैंचामा दुर्लभ र महंगो आँप फलेको थाहा पाएपछि गत वर्ष चोरी पनि भएको थियो । आँपहरू चोरी भए पनि उनी’हरूले रूख भने जोगा’उन सफल भएका थिए । त्यसरी नै फेरि चोरी हुने डरमा छन् परिहर दम्पती ।
आफ्ना महंगा र दुर्लभ आँप चोरी हुनबाट जोगा’उन उनीहरूले सुरक्षा दिएका छन् । दम्पतीले आँप जोगाउन चार जना सुरक्षा गार्ड खटाएका छन् भने ६ वटा कुकुर पनि पालेका छन् । यो खालको आँप भारतमा बिरलै पाइने हिन्दुस्तान टाइ’म्सले जनाएको छ । मियाजाकी आँपलाई सूर्य’को अण्डा पनि भनिन्छ ।
भारतको मध्यप्रदेशस्थित जबलपु’रका एक जोडीले दुई वर्षअघि आफ्नो बगैंचामा आँपका बोट रोपेका थिए। संकल्प परिहर र रानी परिहर दम्पतीले बगैं’चामा अरू रूख रोप्दा आँप पनि लगाएका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले आफूले रोपेका आँपका बोट पनि भारतमा भएका अरू आँपजस्तै फल लाग्छ होला भन्ने ठानेका थिए । उनीहरुको स’माचार अहिले बिश्व:भरी फेलिरहेको छ । इताजा खबरबाट
August 21, 2020 admin समाचार 25163
पछिल्लो समय मोडल तथा कलाकार पल शाह फिल्ममा भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा देखिएका छन् । म्युजिक भिडि’योमा उनको राम्रो माग छ । पलले अभिनय गरेका म्युजिक भिडियो’हरुले चर्चा पनि कमाउने गर्छन् । अर्कातिर म्युजिक भिडियो’बाट
May 3, 2021 admin समाचार 4329
November 16, 2020 admin समाचार 8150
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सुन्द’रीहरु विबाह लग’त्तै चलचित्र क्षेत्रबाट पला’यत हुँदै आएको परिप्रे’क्षमा नायिका आचल शर्मा भने विबा’हपछि पनि जम्ने संकेत देखा’एकी छिन् । विबाह लग’त्तै कोरोना कहर सुरुभएपछि चल’चित्रमा काम गर्ने वाता’वरण नभए पनि म्यूजिक